Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday oo la shewgay in uu magacaabay Gole adeeg sharci daraa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday oo la shewgay in uu magacaabay Gole...
Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday oo la shewgay in uu magacaabay Gole adeeg sharci daraa
Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in si sharci daro ah u magacaabay xubno kamid noqonaya gollaha adeega garsoorka dalka .
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in Farmaajo si sharci daro ah xalay u saxiixay Todoba ka mid ah Sagaalka xubnood ee Golaha Addeegga Garsoorka, kuwaa uu sheegay in aysan waafaqsanayn Dastuurka iyo Sharciga Dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka.
Waxa uu sheegay Xildhibaanka in magacaabista xubnahan uu sameeyay Madaxweyne Farmaajo xili mudo xileedkiisu dhamaaday, waxa uuna xusay in taariikhda magacaabista laga dhigay sanadkii hore si umada loo qaldo.
Halkan ka akhriso qoraal uu arintan uga hadlay Mahad Salaad
FARMAAJO WAA SOO XARGAGOOSTAY EE DALKA IYO DADKA HA LAGA BADBAADIYO‼️
Xeerkan wuxuu ka soo horjeedaa Qod. 7aad ee Sharciga Dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka ee si cad u qeexaya Habraaca Magacaabista Xubnaha Golaha Adeegga Garsoorka. Qodobkan waxaa horay u soo jebiyay Xukuumadii xilgaarsiinta ee Mahdi Guuleed hoggaaminayay.
Xeerkan wuxuu ka soo horjeedaa Qod. 112aad dastuurka ee si cad u qeexaya in Magacaabidda Guddiyada Madaxbannan Heer Federaal marka Golaha Wasiirrada ansixiyaan ay magacyadooda u gudbinayaan Baarlamaanka Federaalka (labada aqal) si uu u ansixiyo, kadibna waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro. Iyadana ma dhicin oo Farmaajo ayaa mar kale ka tilaabsaday ansixinta Aqalka Sare!
Xeerkan wuxuu ka soo horjeedaa Qod. 85aad Dastuurka ee Dhaqangelidda Sharciyada maadaaba uusan soo marin habraaca sharci-dejinta labada Aqal ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ee ku xusan qodobkan.
Farmaajo wuxuu si bareer ah ugu tuntay Qod. 87aad (2), 90aad (f), 96aad Dastuurka ee xeerinaya in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu xilkiisa u gudanaayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diintu ku jirto, dhawrayana Dastuurka Qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
Previous articleMagaalada Baydhabo waxaa ku wajahan Guddiyo farsamo oo ka kala socda dowladda Federaalka, maamul Goboleedyada dalka
Next articleSiyaasiyiin loo haysto lacag ay ku lunsadeen aaskii Mandela
Maxkamada aduunka oo billawday baaritaan la xiriiro dambiyada dagaal ee ka dhacay dhulka Falastiin.
Taliye Xigeenka Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, S/Guuto Kaniif oo xalay kormeer ku...
Maxkamada aduunka oo billawday baaritaan la xiriiro dambiyada dagaal ee ka...